RASMI: Kooxda Crystal Palace oo shaqada tababarenimo ka cayrisay Alan Pardew – Gool FM
RASMI: Kooxda Crystal Palace oo shaqada tababarenimo ka cayrisay Alan Pardew
Haaruun December 22, 2016
(London) 22 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Crystal Palace si rasmi ah u shaacisay inay shaqada tababarenimo ee kooxda ka cayrisay macallin Alan Pardew, kaddib bandhiggiisii liistay ee Premier League oo uu kooxda u horseeday xilli ciyaareedkan.
Crystal Palace ayaa sanadkan 2016 ciyaartay 36 kulan horyaalka Premier League, waxa ay guulo kaareen kaliya 6 kulan, waxa ay barbaro galeen 8 kulan, halka ay guuldarrooyin la kulmeen 22 kulan, waxaana mudadaas ay heleen 26 dhibcood.
Dhinaca kale macallin Alan Pardew ayaa uga mahadceliyey Crystal Palace wadashaqeyntii uu la lahaa isagoo si gaar ah ugu mahad celiyey ciyaartoyda kooxda uu uu ku tilmaamay inay wax kasta siiyeen isaga.
Tababare Pardew ayaa markii uu la wareegayey shaqada kooxda Crystal Palace waxa uu uga soo biiray naadiga Newcastle United, waxaana 17 kulan oo Premier League uu hoggaamiyey xilli ciyaareedkan ay kooxdiisa heshay 15-dhibcood.
''Icardi ayaa ka wanaagsan Higuain'' - Sandro Mazzola
Juventus oo raadinaysa xiddiga Barcelona ee Ivan Rakitic